Play 9 994
Umbhali: UDavide Eckert, Warwick Carter, Michael Flahault
Thwebula Ukukhishwa kwe-FSX noma i-SP2 & FSX-Steam #Ayihlolwe uma ngabe i-Cockpit ye-Virtual Cockpit ye-FSX #3D
The North American Aviation T-6 Texan kwaba single-engine umqeqeshi eziphambili izindiza esisetshenziselwa ukuqeqesha abashayeli bezindiza e-United States Army Air Forces, United States Navy, Royal Air Force nezinye amabutho nomoya WeBrithani phakathi neMpi Yezwe II futhi singene 1950 sika. Kwadalwa North American Aviation, I T-6 is ezihlukahlukene namagama kuye imodeli nokuqhuba air force eyaziwa. I USAAC esiqokiwe it njengoba "AT-6", US Navy the "SNJ", futhi WeBrithani air amabutho, i-Harvard, igama it is best aziwa ngaphandle kwe-United States. It uhlala a ethandwa warbird izindiza.
Kufaka ukwakheka ezimbili, inkambiso imisindo kanye abanikeze asebenza nabo functional virtual, umshini enhle.
Attention njengoba iningi add-on for FSX kumelwe ozifakile FSX SP2 (Service Pack 2) salokhu ukuthungwa add-on imisebenzi, kungenjalo kuyoba esobala futhi ngaphandle. Chofoza lapha ukulanda futhi ufake SP2. Qaphela ukuthi kumelwe kakade unayo SP1 efakwe ukufaka SP2.
Ngemva kwalezi manipulations uma kusadingeka nezinkinga thwebula "Izikali Lokubuyisela"Futhi ukhubaze DX10 preview
North American T-6G Texan for FSX SP2 Thwebula
Incazelo 2 240
Alpha T-28 iThrojani Setha FSX & P3D
Incazelo 7 716
Incazelo 14 265
Incazelo 16 423
Incazelo 26 116